मेरो अमेरिकाको भिसा भएको पासपोर्टको म्याद सकियो, के कुरामा ध्यान दिने ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
मेरो अमेरिकाको भिसा भएको पासपोर्टको म्याद सकियो, के कुरामा ध्यान दिने ?
यदि तपाईको पासपोर्टको म्याद सकिएको छ तर अमेरिका यात्रा गर्नका लागि भिसाको म्याद भने बाँकी नै छ भने तपाई त्यही भिसामा अमेरिका यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ । तर तपाईले आफूसँग म्याद नसकिएको नयाँ र भिसा भएको पूरानो दुबै पासपोर्ट बोक्नुपर्छ ।
तपाईको भिसा नष्ट भएको, च्यातिएको हुनुहुँदैन भने जुन प्रयोजनका लागि अमेरिका जान लाग्नुभएको हो, सोही प्रयोजनको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि तपाई घुम्न अमेरिका जान लाग्नुभएको हो भने पर्यटक भिसा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
तपाईको म्याद सहितको भिसा भएको पूरानो पासपोर्ट र नयाँ पासपोर्ट एउटै देशको हुनुपर्छ । त्यस्तै पासपोर्टको प्रकार पनि एउटै हुनुपर्छ । यदि तपाईको भिसा कूटनीतिक पासपोर्टमा छ भने नयाँ पासपोर्ट पनि कूटनीतिक नै हुनुपर्छ । नियमित पासपोर्टमा छ भने नयाँ पासपोर्ट पनि नियमित नै हुनुपर्छ ।
अमेरिका प्रवेश गर्ने बेलामा विमानस्थलमा वा सिमानाकामा अधिकारीले तपाईको पूरानो पासपोर्टमा रहेको भिसा चेक गर्नेछन् । त्यसपछि तपाईको नयाँ पासपोर्टमा अर्को पासपोर्टमा भिसा रहेको नोटसहितको छाप लगाउनेछन् ।
तपाईले पूरानो पासपोर्टमा रहेको भिसा उप्काएर नयाँमा टाँस्ने प्रयास नगर्नुहोला । यदि तपाई त्यसो गर्नुभएको खण्डमा तपाईको भिसा रद्द हुनेछ ।
श्रोत: अमेरिकी विदेश मन्त्रालय